အဝတ်ပျော့အမွှေးဆီ by popolay.com
25 May 2021 24,352 Views
သင့်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယဉ်ပုံက သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ နေ့တာတစ်ရက်ကို အစပျိုးချင်ကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ အဝတ်အစားတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိမနေဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကော? သင့်အဝတ်အထည်တွေဟာ အနံ့အသက်ဆိုးဝါးပြီးကြမ်းတမ်းနေပါသလား? အဲ့ဒီပြသနာတွေအတွက် Hygiene အဝတ်ပျော့ဆေးရည်က ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဝတ်အထည်တွေမှာ ပေါက်ဖွားနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် - လူတိုင်းရဲ့အထင်မှာ အင်္ကျီကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပြီး အဝတ်အထည်တွေကိုကြာရှည်စွာမွှေးကြိုင်စေပါတယ်။ မှန်ပါတယ် Hygiene မှာ အဖြေရှိပါတယ်။
Hygiene ဟာ သုံးစွဲသူတွေအတွက်စိတ်ကျေနပ်စေမည့် အဝတ်ပျော့ဆေးရည်ရရှိအောင် အစဉ်မပျက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ထီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အမျိုးအစား ရွေးချယ်ရန် အခက်အခဲရှိနေပါက ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အမျိုးအစားကို တိတိကျကျရွေးခြယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Concentration and Technology
နည်းပညာမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Hygiene အဝတ်ပျော့ဆေးရည်မှာ အဝတ်ထည်တွေကို ပျော့ပျောင်း နူးညံ့စေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Hygiene Expert Care Milky Touch ဟာ အဝတ်ကိုပျော့ပျောင်းစေပြီး မွှေးရနံ့သင်းသင်းလေးဖြစ်စေပါတယ်။ Hygiene Expert Care Morning Fresh ဟာ ပန်းရနံ့မွှေးကြိုင်ပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါတယ်။ Hygiene Expert Care So Happy Fragrance ကတော့ သင့်ကို တစ်ရက်တာလုံး ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းစေမှာပါ၊
သုံးစွဲသူတွေဟာ နှစ်သက်ရာအနံ့အလိုက် အဝတ်ပျော့ဆေးရည်ကိုရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်နှစ်သက်တဲ့အင်္ကျီကို တစ်ရက်တာလုံးမွှေးကြိုင်စေမှာပါ။ ဒီခေတ်မှာတော့ အဝတ်ပျော့ဆေးရည်တွေကို ပန်းပင်တွေ၊ သစ်သီးတွေ၊ ပန်းပွင့်တွေကနေ တီထွင်ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ Hygiene အဝတ်ပျော့ဆေးရည်ကလည်း ရာနှုန်းပြည့် သဘာ၀ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ Hygiene Spring Magnolia လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထုတ်ပိုးမှုကိုလည်း အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Hygiene အဝတ်ပျော့ဆေးရည်ကို သုံးဖို စိတ်ဝင်စားနေပြီမလား? အခုဘဲ သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ အထုပ်သေး ၁ထုပ်ဟာ အင်္ကျီ ၁၅ထည်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Hygiene အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အသုံးပြုသူတိုင်းကို ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။